Mogadishu Journal » 2018 » July » 20
Cabdiraxmaan Cirro oo eedeyn u jeediyay Xukuumadda Somaliland
Mjournal :-Guddoomiyaha Xisbiga mucaaradka Waddani ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi (Cirro) oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ku eedeeyay Maamulka Somaliland in uu wakiilo u dirsaday shirka lagu soo gabagabeeyay magaalada Brussels. Siyaasiga...
Weerar Mindi loo adeegsaday oo ka dhacay dalka Jarmalka (Daawo Sawirada)
Mjournal :-Nin Dhalinyaro ah oo ku hubeesnaa Mindi ayaa weerar ku qaaday dad saarnaa gaari bas ah , weerarkan ayaana ka dhacay magaalada lagu magacaabo Luebeck ee ku taalla waqooyiga dalka Jarmalka . Goob joogayaal ayaa ku waramay in ninkan oo dhinac ka saarnaa gaariga baska ah...
Shabaab oo wadada u galay gaari Qaad siday
Mjournal :-Wararka ka imanaya degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in gaari Homy ah oo u soo sidey qaad degmada Balcad ay wadada u galeen maleeshiyaad ka tirsan Al-shabaab iyagoo dhaawacay darawalkii gaariga. Gaarigan ayaa ka soo tegey magaalada Jowhar waxana uu ku...
Baarlamaanka Puntland oo shaqadii ka joojiyey Hay’ada shaqaalaha Rayidka ah
Mjournal :-Baarlamaanka Puntland oo ku jira kalfadhiga 41-aad ayaa fadhigiisa 13-aad ka dooday habka shaqaalaynta shaqaalaha rayidka ah ee Puntland. Gudoomiye kuxigeenka Koowaad ee Baarlamaanka Puntland Cabdixamiid Cabdixamiid sheikh Cabdisalaan ayaa sheegay in dood dheer kadib...
Al-shabaab oo la wareegay deegaanno u dhow buuraha Gal-gala ee Puntland
Mjournal :-Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab ay la wareegeen deegaan lagu magacaabo Af Urur oo aan ka fogeenka Buuraha Gal-gala ee Puntland. Dagaalamayaasha la wareegay deegaanka Af Urur ayaa la sheegayaa in...
Mareykanka oo sharciga u cusbooneysiiyay Soomaali badan
Mjournal :-Waaxda arrimaha gudaha dalka Mareykanka ee loo yaqaano (Home Land Security) ayaa mudo 18 bilood ah sharciga dal ku jooga ah u kordhisay 500 qof oo Soomaali ah, kuwaasi oo aad uga wal walsanaa waxa ay la kulmi doonaan. Dadka sharcigan loo yaqaano TBS-ka ee ku meel...
Liverpool oo ku dhawaaqday saxiixa goolhaye Alisson Becker!
Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ugu dambeyn ku guuleysatay inay dhameystirto saxiixa Alisson Becker Reds ayaa heshiiskan kusoo gabagabeysay €72.5m oo ay kaga soo qaadatay kooxda AS Roma isagoo noqday goolhayihii ugu qaalisanaa taariikhda kubadda cagta. 25-jirkan ayaa laad...
Jidadka xiran ee Muqdisho oo la amray in 48 saacadood lagu furo
Mjournal :-Guddiga Amniga Qaranka oo kulan ku yeeshay xalay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray awaamiir ku aaddan amniga caasimadda iyo Dekedda Muqdisho. Madaxweynaha J.F.S Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isugu yeeray guddiga Amniga Qaranka, si looga jawaabo cabashooyin...
Wariye Yoonis Cali Nuur oo ku geeriyooday London
Mjournal : -Allaha u naxariistee waxaa xalay Isbitaal ku yaalla magaalada London ee dalka Ingiriiska ku geeriyooday Wariye Yonis Cali Nuur oo mudo ku dhaw 30 sano ka tirsanaan jiray Idaacadda BBC-da. Wariye Yoonis ayaa mudooyinkii dambe wuxuu la taliye u ahaa Wasiirka Warfaafinta...
Mareykanka oo liiska Argaggixisada ku daray koox uu sheegay inay ka hawlgasho Soomaaliya
Mjournal :-Dowladda Mareykanka ayaa bayaan ay shalay oo Khamiis aheyd soo saartay waxa ay liiska Argagixisada ku dartay kooxda Jamaactu Al Hijra oo uu kuisheegay inay ka hawlgasho Soomaaliya iyo Kenya, xiriirna la leh Shabaab. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bayaan ay...